Etu ị ga - esi chebe ndụ ekwentị gị mgbe o nwetara mmiri | Akụkọ akụrụngwa
N'oge na-adịghị anya gara aga, n'otu n'ime ụbọchị ndị ahụ mgbe ị na-eteta n'ụdị ọnọdụ ọjọọ na ebe ihe niile na-emebi na usoro ọ bụla ị na-eme, m na-agụ akụkọ kachasị mkpa nke ụbọchị na ekwentị m. N’otu akpachapụghị anya, kọfị kọfị m pụrụ n’aka m, mbara ala nile kwụ n’ahịrị iji bibie ụbọchị m, na ama m gwusiri na mmiri kọfị. N'ezie ngwaọrụ mkpanaka m anaghị eguzogide mmiri, obere kọfị.
Nke a nwere ike ime onye ọ bụla, agwara m onwe m ka m kasie onwe m obi, amakwaara m na ihe ka njọ emeela ọtụtụ n'ime anyị, n'etiti nke m ga-eme ka ọ pụta ìhè na ekwentị ahụ dara n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ, na ọ na-agwụ na igwe ịsa ahụ ma ọ bụ dị ka nke m nwanne nwanyi na adigide ya rue ebighi ebi. Nwanne m nwanyị enweghị mgbe ọ bụla iji weghachite Samsung Galaxy S2 ya, mana ọ bụrụ na ị jisiri ike nweta ya na mmiri taa, anyị ga-akụziri gị n'ụzọ dị mfe otu esi echekwa ndụ ekwentị gị mgbe ọ nwetara mmiri.
Methodszọ niile anyị ga - egosi gị n’isiokwu a bara ezigbo uru, mana ọ bụghị n’enweghi ngwụcha. Ọ bụrụ na etinyere ekwentị gị na bat ruo ọtụtụ ụbọchị, ụjọ na-atụ m na ị ga-azụta nke ọhụrụ n'ihi na ọ nweghị ụzọ ọ bụla anyị ga-egosi gị ga-esi baa uru.
1 Emela nke a site na ama ama gị ma ọ bụ tinye ya
2 Nzọụkwụ mbụ iji mee ka ekwentị gị gbanwee
Emela nke a site na ama ama gị ma ọ bụ tinye ya
Ọ bụrụ na agbanyụrụ ya, agbanyela ya, hapụ ya ka ọ dị.
Anwala imetu igodo ma ọ bụ bọtịnụ niile aka.
Ọ bụrụ na ị bụghị ọkachamara, amalitela ịkwasasị ngwaọrụ mkpanaka gị n'ihi na ihe kachasị mfe bụ na ị ga-akwụsị ịkwụsị akwụkwọ ikike ya. Ọ bụrụ n’inwe ihe ọmụma ọ bụla ma chee na ị ga - edozi nsogbu, were ya nwayọ ma kpachara anya.
Kpoo ya, egbula ya, n'ụzọ dị otú a, mmiri agaghị apụta ma ọ bụrụ na ọ ruru n'ime ya ma nwee ike imerụ ngwaọrụ ahụ.
Ejila draya ntutu iji gbalịa kpoo ọnụ gị. Nke a nwere mmetụta dị iche na naanị ihe ọ na - eme bụ na ọ na - eburu mmiri ma ọ bụ mmiri mmiri nke abanyela na ngwaọrụ gị gaa na mpaghara ndị ọzọ ebe ọ erubeghị.
N'ikpeazụ, etinyela okpomọkụ na ekwentị gị n'ihi na ọ nwere ike iwebiga ụfọdụ ihe mejupụtara ya ma mebie ha. Ọ na-aga n'ekwughị na ị gaghị etinye ọnụ gị n'ọnọdụ ọ bụla na ngwa ndakwa nri ma ọ bụ na friza.
Fọdụ n'ime ihe ndị a anyị gosipụtara ugbu a dị ka ihe ezi uche dị na ya, mana mgbe ngwaọrụ mkpanaka anyị nwere mmiri, anyị na-anwa idozi ya ozugbo enwere ike, mgbe ụfọdụ na-eme mkpebi ndị ezi uche dị na ha na-eme ka ọnọdụ ahụ dịkwuo ntakịrị.
Nzọụkwụ mbụ iji mee ka ekwentị gị gbanwee
Ugbu a anyị matara ihe anyị ekwesịghị ime, anyị ga-agbadata ọrụ iji gbalịa ịchekwa ọdụ anyị, mmiri dị n'ime na n'èzí.
Ọ bụrụ na ekwentị gị nwere ihe mkpuchi, wepụ ya ozugbo. Wepu kwa kaadi microSD na kaadi SIM.
Ọ bụrụ na agbanyụghị ekwentị mkpanaka gị, gbanyụọ ya ugbu a ma debe ya n'ọnọdụ kwụ ọtọ ka ọ bụrụ na mmiri dị n'ime ya, ọ ga-agbadata ma nwee ohere ịhapụ onwe ya
N'ọnọdụ na ama gị abụghị otu, wepụ mkpuchi azụ na batrị nke mere na ọ naghị emetụta mmiri mmiri na-awagharị kpamkpam n'ime mkpanaka anyị
Oge eruola ịmalite ịmalite ime ihe iji gbochie mmiri ịnọgide na-etinye ọdịnihu nke ngwaọrụ mkpanaka anyị n'ihe ize ndụ. Were mpempe akwụkwọ ma ọ bụ akwa nhicha ahụ ma hapụ ya ka ọ bụrụ njedebe gị nke ọma. Kpachara anya ka ị ghara ịkwaga ekwentị gị nke ukwuu ka mmiri ahụ ghara iru ebe ndị ọzọ erubeghị.
Ọ bụrụ na ekwentị gị nwere ogologo bat n'ime bat ahụ ma ọ bụ na igwe ịsa ahụ, akwa nhicha ma ọ bụ akwa agaghị eme gị ọtụtụ ihe ọma, yabụ ọ ka mma. chọọ obere ihe nhicha ọkụ nke na-enye gị ohere ịmịchaa mmiri mmiri ahụ nke ọma.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ọrụ ka kwenyere na akụkọ ifo nke osikapa iji chekwaa ngwaọrụ mkpanaka site na mmiri bụ ụgha, ọ bụghị. Ọ bụrụ na ị nwere osikapa n'ụlọ, tinye ọnụ gị n'ime akpa rọba jupụtara na osikapa. Ọ bụrụ n’inweghị osikapa, gbaga na nnukwu ụlọ ahịa iji zụta ngwugwu. Hapụ ya ebe ahụ ruo awa ole na ole ma ọ bụ ọbụna otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ.
Ọ bụrụ na mmiri ahụ dị ka ọ ruru eriri afọ nke ọnụ, ikekwe osikapa agaghị enyere anyị aka nke ukwuu. Enwere ugbu a n'ahịa akpa ihicha maka smartphones. Ọ bụrụ na ị nwere otu n'ụlọ, ebe ọ bụ na ị bụ onye ọrụ nlezianya anya, tinye ya n'ime ya ozugbo. Ọ bụrụ n’inwere ohere ịzụta ya ọsọsọ, mee ya, n’ihi na ọ nwere ike ichekwaa ịzụrụ mkpanaka ọhụrụ.
Mgbe ị lekọtara ma zụlite ngwaọrụ mkpanaka gị, oge eruola ịlele ma ọ bụrụ na anyị jisiri ike ịchekwa ngwaọrụ anyị dị oké ọnụ ahịa. Lelee ma ọ bụrụ na ọ na-agbanye ma ọ bụrụ na ọ na-eme, lelee na ihe niile na-arụ ọrụ n'ụzọ nkịtị ma ọ bụ obere.
Ọtụtụ oge Ọ bụrụ na mmiri mmiri nke dara ma tinye ọnụ gị abụghị "ihe ike", n'ezie ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla na mkpanaka gị na-arụ ọrụ ọzọ zuru oke. Imirikiti ọnụ ahịa ndị a na-ere taa n'ahịa nwere ike iguzogide ntakịrị mmiri na ọbụlagodi itinye oge ụfọdụ.
Bat kọfị nke ngwaọrụ mkpanaka m tara ahụhụ hapụrụ ụfọdụ ntụpọ nke were m ọtụtụ ọrụ iji mee ka ọ dị ọcha, mana ama ahụ rụpụtara ọzọ n'enweghị nsogbu ọ bụla. N'ezie, a ga m azụta nke ọhụrụ akpa ihicha na ọ bụ na mmadụ nwere akọ na-aba uru abụọ.
Ọ bụrụ na ekwentị gị anaghị arụ ọrụ, gbalịa ịkwụ ụgwọ ya n'ihi na ọ nwere ike ịbụ na mgbe ịhapụ ya ụbọchị ole na ole ihicha ya, batrị agwụla. Ọ bụrụ na ọ naghị ebu ibu, anyị na-eche nsogbu abụọ ihu. Nke mbụ n’ime ha bụ na mmiri emebila batrị yabụ na anyị ga-azụta nke ọhụrụ, ma ọ bụrụ na anyị nwere ike wepu ya na ọdụ.
Ọ bụrụ na mgbe anyị gbanwechara batrị, ọ bụrụ na anyị nwere ike, ngwaọrụ mkpanaka anyị anaghị arụ ọrụ, oge eruola ka ịdebe nkeji oge maka ya wee malite ịchọ ịntanetị maka ama ọhụụ ka ịghara ibipụ ya ogologo. Nwere ike iwere ya mgbe niile na ịnwale ọnwụnwa nke ọkachamara ma ọ bụ ụlọ nrụziMana n'ọnọdụ ndị a yana mmiri mmiri dị na ya, obere olile anya adịghị maka ndozi zuru oke.
Ngwa ekwentị gị emetụla mmiri ma ọ bụ tinye mmiri?. Gwa anyị n'ime oghere edebere maka nkọwa na post a ma gwa anyị otu ị siri jikwaa ịtụte ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Otu esi echekwa ndụ nke ekwentị gị mgbe ọ nwetara mmiri
Ndewo onye ọ bụla, etinyere m Galaxy S4 smartphone na ụlọ mposi, (ee na batrị) ma mmiri kpuchiri ya. Agbalịrị m ime ka ọ rụọ ọrụ site n'itinye ya otu mita ma ọ bụ karịa n'ebe draya ahụ, yana okpomọkụ yana opekempe maka awa 4 mgbe ahụ agbanyeghị m ya ruo ụbọchị na-esote